Pogba oo doortay xidiga uu doonayo inuu ka garab ciyaaro Messi iyo Ronaldo kadib ka tagistiisa Man United – Gool FM
(Manchester) 09 Sept 2018. Laacibka reer France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday ku biirista Barcelona, si uu kaga garab ciyaaro dhigiisa reer Argantina ee Lionel Messi.
Barcelona ayaa isku dayday inoo lasoo saxiixato Pogba suuqii dhawaa ee xagaaga, laakiin hehsiiska ayaa kusoo idlaaday si fashil ah, laakiin kooxda reer Spain ayaa la filayaa inay isku dayo kale sameyn doonaan labada suuq kale ee soo aadan.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in laacibka xulka qaranka France uu si dhab ah u doonayo ka garab ciyaarista Lionel Messi, xili ilaa iyo haatan uusan wali fadhinin mustaqbalkiisa Old Trafford sababa la xiriira khilaafka kala dhexeeya Jose Mourinho.
Paul Pogba ayaa la xasuusan yahay in xili hore uu Lionel Messi ka hadlay wuxuuna yiri “Messi wuxuu iga dhigay in kubada cagta aan jeclaado, Lio waa xidiga aan kaga daydo kubada cagta, laacib ahaan iyo shaqsi ahaanba”.
Wargeyska ayaa gu dambeyntii tilmaamayay in Pal Pogba uu doorbidayo in Messi uu kaga garab ciyaaro Barcelona, marka loo fiiriyo dib ugu laabashada kooxdiisii hore ee Juventus iyo ka garab ciyaarista Cristiano Ronaldo.
“Iibinta Mohamed Salah, Alisson Becker iyo Miralem Pjanić ma ahayn go’aan xun”… Monchi